Biixi Iyo/ Ama Muranka tikidhada baarkinka | Violation Information | The City of Portland, Oregon
Haddii aad heshid waraqadaha ganaxa, waa inaad sameysa waxyaalaha laguu sheegi doono 30 malimot guadahiis tariq lagu qorey, ama haddii aadan bixin tigidhka, tallaabooyinka sharciga waa la qaadi doona. Waxaa maxakamada awood uledahay inay kordhiso lacagta hadad dhibin, waxay soo saari kartaa amar lagu jiidi karo baabuurka, ama ku bilabmi karo xukunkaka maxkamad, ama oo ku soo rogo ganaax ilaa qaddarka ugu badan ee sharcigu ogol yahay iyo waxaan u soo diri doonaa arrinta ilaa Department of Reveneue for Collection.
Hoos waxaa ku qoran 3 doorasho oo kala duwan oo aad sameyn kartid ka hor 30 maalmood laga bilaabo taariikhda ku qoray. Dooro 1 ka mid ah ku qooran hoose.
Ikhtiyaarka 1: WAA INAT DHIBTA MURUN KA ku riid baqshadda jaalaha jeeg ama money order wareega qaddarka sharraxaadda. Ka dhig jeeggaaga ama jeegaaga lacag bixinta Gobolka Oregon. Ku qor nambarkaaga iyo lambarka taarikada baabuurka ee jeegga ama lacagta. Waxaa laga yaabaa inaad bixiso caddayn buuxda oo leh Visa ama Mastercard adigoo wacaya 503-988-3235, dhageyso fariinta oo riix lambarka 2 lambarka taleefankaaga. Ha soo dirin lacag caddaan ah. Riix halkan si aad u bixiso cinwaankaaga baabuur dhigasha hadda. Riix halkan si aad u bixiso cinwaankaaga baabur dhigashada hadaa.
Xulashada 2aad: U GUDUB GANACSIGA IYO FURITAANKA QORAALKA Ku soo lifaaq bokhshida jaalaha ah jeeg ama jeeg wareega cadadka caddaynta iyo sharaxaad qoran oo gaar ah oo ku saabsan sababta aad uga soo horjeesatay ciddii. Sharaxaada qoraalka ah waa ka-dhaafitaanka xuquuqdaada dhageysiga maxkamada iyo ogolaashaha xukun kasta oo la sameeyey. Maxkamaddu waxay tixgelin doontaa sharraxaada qoran waxayna celin doontaa lacagtaada ama ka lumi doontaa dhammaan ama qayb ka mid ah. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan ka-soocistaada, fadlan booqo bogga internetka ee maxkamada Halkan riix si aad u hesho bogga internetka ee Circuit Court
Ikhtiyaarka 3. JADWALKA MAQALKA MAXKAMADDA Waxaa jira 2 siyaabood oo kala duwan oo loo qorsheeyo dhageysiga maxkamadda. Xulashada koowaad waa in la geliyo baqshadda jinsiga ah ee jeeg ama money order areegtoadarka caddaynta iyadoo la raacayo codsi qoraal ah oo loogu talagalay dhageysiga. Xulashada labaad waxay tahay inay qof ahaan ka muuqato Circuit Court Parking Tag Office, kholka 131B, Maxkamadda Degmada, 1021 S.W. Fourth Avenue, Portland, Oregon si ay u codsadaan dhageysiga iyo bixinta khidmada.
Haddii gaarigaaga laga jiido xayiraadyada aan la bixin, waa inaad bixisaa inta oo dhan lacagta laguu balan qaaday Circuit Court Parking Tag Office. Shirkadda cirifka ayaa sidoo kale lacag ujrad ah ka hor inta aysan sii wadin baabuurka.Circuit Court Parking Tag Office waxaa la heli karaa dadka naafada ah. Codsiyada guryaha macquulka ah, oo ay ku jiraan turjubaan dhageysiga maqalka, waa in la sameeyaa ugu yaraan 48 saacadood ka hor muuqaalka. Codsiyada waa in lagu sameeyaa Circuit Court Parking Tag Office. (503) 988-3235 ama lambarka qoraalka (503) 988-3907.